Rag isku Filaaday Rag kale iskama celiyaan !. | ogaden24
Rag isku Filaaday Rag kale iskama celiyaan !.
Dalkan Itobiya ee inna Gumaysta waa la kala shaqaysanayaa waxaana loo kala Xoog badanayaa sida loo kala dadaal badan yahay ee loo kala firfircoon yahay.
Dadkan aad arkayso sii jeedkooda waa sirdoon cusub oo abiye tababartay; waxaa la innoo sheegi doonaa inay danaha qaranka itoobiya ilaalin doonaan.
Laakiin waxay ka shaqayn doonaan masaalixda oromada oo kaliya (Siday tigraygu u shaqaysteen ayaa siyaasadda loogu xammaalanayaa) Haddii aadan cadowgaaga iska celin karin waa la dhexgalaa baan maqli jiray, tusaale fudud waxaan u soo qaadan karnaa oromada. Tolow maxaa suurta galiyey guusha oromada jawaabta idinka ayaan idiin daynayaa!
Soomaalidu tiro ahaan 10 milyan waa qowmiyadda labaad ee ugu dhulwayn, tiro ahaanna waxaan nahay ta saddexaad (Oromo iyo axmaaro kaliya ayaa innaga badan) Sidaas oo ay tahay waxaan nahay dad dulman oo bannaanka ka jooga.
Markaan darso xaaladda itoobiya waxaan is dhahaa war kuwii tan iyo maalintaan caqliyey lahaa itoobiyaannimada ayaan ku faanaynaa ma suuroobi wayday inay wax la qaybsadaan asaagood? Markaas baan haddana isugu jawaabaa waxay ahaayeen awrkiraaleyaal lagu shaqaysto iyo caadeqaateyaal.
Hadda iyo kow waxaan haysannaa fursad dahabi ah oo laga yaabo inay inna soo mari waydo! Waxaa la innooga baahan yahay labo qodob oo kaliya oo aan mid saddexaad lahayn! Qowmiyadaga itoobiya inaan waxla qaybsanno oo koobkii biyo ah ee la helaba qarka qabsanno iyo inaan wexeenna ka goosanno!.
Nuxurku waxaa weeye: meesha inaan ka muuqanno ama aan ka maqnaanno! Wixii intaas ka soo hadhaa waa wakhti lumis!
Waxaa jira wadiiqooyin badan oo guusha lagu gaadhi karo sidaan is lee yahay; dadka soomaaliyeed waa duul lagu aafeeyey khuraafaad iyo been taas oo ka indho saabtay cadowgooda dhabta ee la dagaallamaya jiritaankooda.
In kasta oo ay wanaagsan tahay caddaalad iyo sinnaan dhexdeenna ah, haddana waxaa lagama maarmaan ah inaan muhiimadda siinno dhagarta iyo hagardaamada cadowga, wixii dhexdeenna ah na aan dib-u-dhiganno!.
Wixii adiga lagaa qaado ee walaalkaa la siiyaa meel kaama jiro, laakiin sadkaaga axmaarka, oromka, tigrayga, dhabuubka, uraagga iyo gambeelluhu boobayo ayaa ka daran ee indhaha aan dhexdeenna ku fiirinayno aan halkaas u lalinno.
Qof yahow Soomaaliga ah ama nolol sharaf leh noolow, ama geeri dharaf leh dhimo. Qabiilka aad ku dawakhday miyaadan ogayn inaan qabriga lagugu waydiin doonin ee aad kaligaa iilka galayso, iyada oo aan cidna ku wehelin?
Miyaadan ogayn cadka walaalkaa helo in uuna meel fog kaa jirin? Maxaad cadowga u arki la’dahay oo kaa indho saabay? Ma og tahay in midnimada iyo wadajirku guul lagu gaadho tafaraaruqa iyo kala qaybsanaantana laga dhaxlo gul-darro iyo fashil ummadeed?
Bye: Gafdiid Khaliif